१० वटा बैंकले खिम्ती–२ मा ६ अर्ब लगानी गर्दे, कुन–कुन छन् बैंक ? - Deshko News Deshko News १० वटा बैंकले खिम्ती–२ मा ६ अर्ब लगानी गर्दे, कुन–कुन छन् बैंक ? - Deshko News
१० वटा बैंकले खिम्ती–२ मा ६ अर्ब लगानी गर्दे, कुन–कुन छन् बैंक ?
खिम्ती–२ जलविद्युत् आयोजनामा सानिमा बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न १० वटा ‘क’ वर्गका बैंकले लगानी गर्ने भएका छन् ।
प्रवद्र्धकका तर्फबाट पिपल्स इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य र बैंकका तर्फबाट सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले हस्ताक्षर गरे। आयोजनामा सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंक, जनता बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, एनएमबी बैंक, बैंक अफ काठमाडौँ, सिभिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, एनसिसी बैंकले संयुक्त रुपमा लगानी गरेका छन् ।
सो आयोजनामा कूल आठ अर्ब ६५ करोड रहेको छ । त्यसमा बैंकले ६ अर्ब ४८ करोड ४० लाख ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । कूल ४८.८ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना २०७८ असार समान्तमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
दोलखा र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने खिम्ती नदीमा निर्माण गर्न लागिएको सो आयोजनाले २०७३ साल फागुनमा विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र पाएको हो ।
सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दाहालले आयोजना आकर्षक र प्रवद्र्धक इमान्दार देखिएकाले आफूहरुले संयुक्त रुपमा लगानी गरेको बताए । रासस